Ibufe ibu (Naruto) - Magazin ADL ➡
Magazin ADL ➡
Otu mbipụta ADL
ー バ ー ロ ド (Ōbārōdo)
Ihe ngosi data
Boruto # 199 (Lelee Online)
“Comingghọ Onye Mmụta”
Boruto Isi # 33, Boruto Isi # 34
“Gosi na Ị nọ ebe ahụ”
Nwere ike 16, 2021
Super-Ultra-Big Ball Rasengan
"Ibugharị” Ābārōdo) bụ ihe omume 199 nke Boruto: Naruto ndị na-esote anime.
Naruto na -agwa Boruto ka ọ lekọta Kawaki na Himawari. Delta na -eti Kawaki ihe maka itinye ahụ n'ahụ nke, dị ka arịa, abụghị nke ya. Ọ naghị aza ajụjụ Naruto, yabụ na ọ ga -anwa anwa gbuo ya. Ha abụọ na -azụ ahịa ọtụtụ ihe egwu ka Boruto, Kawaki, na Himawari na -ekiri. Naruto na -echetara ya ihe iyi egwu ya, na -ekwu na oge agafeela ugbu a na ọ merụrụ Kawaki, yabụ na ọ ga -eso onye ọ bụla nọ na Kara. Ọ na -abịaru ya nso, yabụ na ọ na -agba ọkụ anya anya ya, nke o ji Big Ball Rasengan gbochie. Delta na-amalite ịmịkọrọ ya, yabụ Naruto na-ewelite ante site na-eto ya ka ọ bụrụ Rasengan Ultra-Big Ball. Boruto ghọtara atụmatụ ya. Delta na -akwa Naruto ọchị maka iche na ọ nweghị ike ịmị nnukwu jutsu. Kawaki chọpụtara na atụmatụ ahụ abaghị uru, mana Boruto gbaziri ya na ọ bụghị ihe Naruto na -eme. Delta ghọtara atụmatụ Naruto, Boruto kọwakwara Kawaki na ọ na -anwa ịmanye mmịkọ ya. Shinobi-ware ya na-ekpo oke ọkụ, anya ya kwụsịrị ịrụ ọrụ. Naruto kọwara na ọ ghọtara na mgbe ọ gbaghaara Rasengan ya, ọ pụtara na echekwara ya ebe, na ụdị nchekwa ahụ ga -enwe oke. Naruto na -etu ọnụ maka nchekwa chakra ya, Delta na -anwa ịwakpo ya n'ụzọ anụ ahụ. Naruto zere ya wee tolite jutsu ya na Rasengan Super-Ultra-Big Ball, na-ebute ya.
Ọ na -awa olulu n'elu ala, ebe Delta dara. Ụmụaka na -eme ememme. Naruto kwupụtara ọchịchọ ya ịjụ ya ajụjụ, yabụ Kawaki na -agba ume ka e gbuo ya ozugbo. Ahụ Delta na-ada ụda, na-ebibi onwe ya. Naruto na -ewepụ ụmụaka site na mgbanaka mgbawa. Delta na -alaghachi azụ, Koji hụrụ ya site na toad ya, onye na -ekwu na ike Naruto ka ezughị. O kwenyesiri ike na igodo ahụ ga -ekpughe ihe nzuzo nke Kama site na Boruto. N’ebe ọzọ, otu di na nwunye na -arụrịta ụka gbasara ndị dọkịta enweghị ike ịgwọ nwa ha nwoke na -arịa ọrịa. Boro na ndị na -eso ụzọ ya na -eleta obodo ahụ, ebe ọ na -agwọ ndị ọrịa. Boro na -agwa ha ka ha kwenye na enwere ike nweta nzọpụta site na Tsukuyomi enweghi ngwụcha, na -ebute ha n'ime òtù nzuzo ya. Ka oge na -aga, Code gara Boro wee nye ya ozi Amado na -agwa ya ka ọ bata maka ndozi. Boro na -ekwu na ọ na -arụsi ọrụ ike, ọ na -akawanye njọ mgbe Koodu jụrụ ma ọ bụrụ ihe na -atọ ụtọ iduhie ndị mmadụ. Koodu dị njikere iji ike weta Boro maka ndozi, ya mere ọ tụgharịrị. N'isi ụlọ ọrụ Kara, Jigen na -emecha chajịa ume, Amado na -achọpụta na ọ na -adịkarị. Ọ na -akọ na enwebeghị akụkọ gbasara Vessel si na Koji ma ọ bụ Delta. Site na mmeghachi omume ya, Jigen kwubiri na ya ekpughebeghị ahumachi ha, nke Amado kwere nkwa ime.
Boruto Uzumaki Yuko Sanpei 瓶 由 布 子 Sanpei Yuko
Naruto uzumaki Junko Takeuchi 竹 内 順子 Takeuchi Junko
Himawari Uzumaki Saori Hayami 早 見 沙織 Hayami Saori
Kawaki Yuma Uchida Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị Uchida Yuma
Delta Hoko Kuwashima 島 Kuwaitima Họko
Jigen Kenjiro Tsuda Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị Tsuda Kenjirọ
Koji Kashin Yuichi Nakamura Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị Nakamura Yuichi
Amado Akio Otsuka 塚 Ukatsuka Akio
Boro Kenta Miyake 三 宅 健 太 Miyake Kenta
Usoro Junta Terashima Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị Terashima Junta
Inori Natsumi Yamada 奈 都 美 Yamada Natsumi
Akpugo Kazuya Saji 佐治 和 也 Saji Kazuya
Nwunye Kokushi Sara Matsumoto 松本松本 Matsumoto Sara
Kanchi Aoi Inase い な せ あ お い Anase Aoi
Ntorobịa obodo Ryo Nishitani 西 谷 亮 Nishitani Ryo
Ndị obodo Kosuke Katayama
Katsunori Okai Daalụ maka itinye akwụkwọ anamachọihe gị
戸 博 一
岡 井 カ ツ ノ リ Katayama Kosuke
Media Naruto Wikipedia
Echefula isoro ndị enyi gị kerịta ibe a na Facebook & Twitter! #Bufee?
5 ụkwụ 8 sentimita mkpụmkpụ maka nwoke?
Kedu ka ị ga -achọpụta nha mmadụ nke UK?
ADLmag.net - Smart azịza gị amamihe ajụjụ ➡ Jụọ ajụjụ, ịkọrọ ihe ọmụma, izute na-akpali ndị mmadụ